I-Ederson Moraes Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO EMZANTSI E-AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola baseBrazil I-Ederson Moraes Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leNjongo yeGoal Stopper eyaziwa kakhulu ngeSitelekiso; "IBrick Wall". Indaba yethu ye-Ederson Moraes yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa komntwana. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye nezinto ezininzi ezithintekayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga neNjongo yakhe yokuGcina i-Reflexes kodwa abambalwa bacinga nge-Edon Moraes's Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Ederson Moraes Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
U-Ederson Santana de Moraes wazalelwa ngomhla we-17th ka-Agasti 1993 e-Osasco, eSão Paulo, eBrazil. Ukukhuliswa kuka-Ederson kwaba nzima kwizezimali eBrazil. Wazalelwa kubazali abahluphekileyo abangenako ukubonelela ngokubanzi kodwa bavumela ibhola njengento yokugqibela.
Ukusukela ngexesha elithile xa wayeyingane, wonke umntu kuquka umqeqeshi wakhe wayembiza njalo "I-Bull". Oku kungenxa yokuba Ibhola lihlala lihlala libomvu kwaye uEdmerson omncinci wakhula ukukwazi ukuhlawulisa kwi-rag yakhe.
Ummangaliso wakhe weza xa wayesebhola ibhola kwindawo ekhethekileyo kwikrele lakhe elide, ebonakala ebhokisini lakhe kwinqanaba lolutsha. U-Addin oku kumandla akhe okuhlawulisa abakhwele, ikhwelo esuka eYurophu yaza yambulela uBenfica scouts oye waba nomdla omkhulu kumgcini mgcini. Okhulile nje ngu-16, u-Ederson wenza umtshintsho kwi-Atlantic ukuya eBenfica, ejoyina i-club yaseLisbon yolutsha. Waziva ekhululekile kakhulu neBrazil efana neendawo ezikuyo.
Ikhefu lakhe elikhulu laseYurophu lithatha ixesha lokuza. Ngexesha elithile, u-Ederson wavunyelwa ukuba ashiye i-Ribeirao ephantsi emva kweminyaka emibili kunye necala le-Primeira Liga. Kwiqela, waba yinto engcono kakhulu kwaye waqhubeka edlala eRio Ave. Akuzange kuthathe ixesha ngaphambi kokuba uBenfica abe nomdla kuye kwakhona.
Waqala kwiqela labo leqela leB kwaye wabonisa ukuba unobumba obufanelekileyo. U-Ederson wadlala kunye nabanye abatsha bafumana uBernardo Silva kwinqanaba lentsha yaseBenfica. U-Ederson wayejongene nemingeni enkulu xa eya kwicala eliphezulu. Umngeni wakhe omkhulu kunzima kukukho kombuso UJulio Cesar, umgcini wezilwanyana ezihlotshisiwe, phakathi kwezithuba.
Lowo owayengu-Inter Milan ngokwenene wayeyityhilwa kwi-2015, efumana ukwandiswa kwemvumelwano kwi-2018. Nangona kunjalo, xa kufika u-Ederson ithuba lokuza kwakhe wathatha. Emva koko uCesar waqala ukunyaniseka kwakhe kumfana oselula.
Nangona esemncinci, u-Ederson wayenomdla omkhulu, wabuyela kabili i-Primeira Liga. Ngesinye isikhathi, iqela lakhe lidlulile njengoko bawunqobe uZenit St Petersburg kwi-Champions League. Ukusekwa kwekota yekota yokugqibela kunye neBayern Munich elaliphathiswe yi Pep Guardiola. U-Ederson wayejongene nomphathi wakhe wekamva Pep Guardiola nje ngokuba uBenfica walahleka ngaphezu kwemilenze emibili kunye nomgcini wegama odlala ngokugqithiseleyo. Oku kwavutha ZePep uthando ngaye. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Ederson Moraes Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Umfazi ka-Ederson Moraes uyamangalisa. Khawujonge i-Lais Moraes enomhle, intombikazi yobuhle obuhle.
Batshatile iminyaka emine kunye neentombi zabo zokuqala zinguJasmin. Xa u-Ederson wajoyina iMan City, wonke umntu akazange ambone. Nguye umyeni wakhe waseLais ongumkhwenkwezi oza kuba neeliso. Bobabini abathandi bahlala bebeka i-cute snaps kwi-Instagram yobudlelwane babo.
I-Lias Beautiful Moraes ibonwa rhoqo kwiindawo ezibukeka kumntu wakhe.
I-Ederson Moraes Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
U-Ederson Maraes unelungelo elilandelayo kubuntu bakhe.
Ama-Ederson Maraes Amandla: Uqulunqa, unomdla, unomusa, unentliziyo efudumeleyo, uvuyo kwaye ngokwenene, uhlekisayo.
U-Ederson Maraes Ubuthathaka: Wayenokuba neentloni, ezikhukhumeleyo, ezinenkani xa ecatshukiswa.
Yintoni u-Ederson Maraes ayithandayo: Ngokuqinisekileyo, uthanda ukunika uncedo lwemali kubantu abahluphekileyo, iindawo zokuzonwabisa, ukuthatha iiholide nokuzonwabisa nabahlobo
Yintoni i-Ederson Maraes ayithandiyo: ayithandi ukungahoywa, ejongene nenyaniso enzima.
Isishwankathelo, u-Ederson uyamangalisa, udala, uyazithemba, unamandla kwaye unomntu onzima kakhulu ukumelana. Unqabileyo, unamahloni kodwa ngaphakathi unjengengonyama elambile kakhulu. Ungomntu onokukwazi ukufezekisa nantoni na ayifunayo kuyo nayiphi na indawo yobomi azinikele kuyo.
I-Ederson Moraes Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -umvambo
U-Ederson uneempawu ze-34 ezihlabekileyo emzimbeni wakhe. Ezi tattoo zinentsingiselo ehlukahlukeneyo, kwiinkcubeko zakhe zobuKristu, umdlalo wakhe webhola kunye nentsapho yakhe eBrazil.
Eqala entanyeni yakhe, u-Ederson unengqayi ephazamisayo nge-apple yakhe ka-Adam ebonakala ngathi ichithwe ngumqulu ocebileyo ngaphantsi kwendlebe yakhe.
Esifuba sakhe sibonisa ukholo lwakhe lobuKristu. U-Ederson unesehobe eqhuma ngaphezu kwegama "NdingokaYesu" Ubeka intanyeni yomnqamlezo ukuze aqhubeke nokuqinisa ukholo lwakhe lobuKristu.
Esemlenzeni wakhe yiPortugal League trophy, eyinqobile kunye noBenfica kwi2015.
I-Ederson Moraes Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ukuhlangana
Ederson wenza 2.42 usindisa ngamnye umdlalo, xa kuthelekiswa noClaudio Bravo 1.44, UDavid De Gea 1.81 noThobaut Courtois 1.52. Enye yezinto ezinjalo zibandakanya ukuba asebenzise iingcamango zakhe ezinamandla kwaye abeke umsebenzi wakhe kumgca njengoko kuchazwe ngezantsi.
Umfanekiso olapha ngezantsi ubonisa umva wokuhlangana ISadio Mane.
I-Ederson Moraes Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Ukuthetha nomama, uyise, abazalwana kunye noodade ababazi u-Ederson ngokugqwesileyo, umfanekiso womntu onokuthula, onomusa ukhula. Ukukhuliswa kwakhe kwaba yimali enzima kodwa abazali bakhe bazisa ixabiso kunye nokuziphatha. U-Ederson uvela kwintsapho yenkolo yobuKristu eqinile.
Into enye eyaziwayo phakathi kwentsapho yakhe inesisa. U-Ederson ngokwakhe uye wanikela malunga ne-£ 10,000 kwiqela lakhe langaphambili le-Osasco kungekudala ukunceda ukucacisa amatyala abo.
I-Ederson Moraes Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Umsebenzi onokwenzeka
Ngaphandle kokungathandabuzeki, u-Ederson ungumlindi, unesibindi, unamandla, nomzimba onamandla. U-Ederson unamandla omzimba, iimpawu ezichukumisayo kunye namakhono amakhulu okuyeka ukudubula.
Wakha udumo njengengcali yokugcina isohlwayo ngexesha lakhe kunye noBenfica. Nangona kunjalo, uhlonishwa kakhulu ngenxa yokusabalalisa kwakhe kunye nobuchule nebhola ezinyaweni zakhe. Olu lawulo kunye nokuzithemba kwibhola kumenza akwazi ukugcina ilifa kwaye ngokukhawuleza adlale ibhola emva emhlabathini ngezandla zakhe okanye nasenyaweni - nokuba xa ephantsi kwengcinezelo. Nangona ebuntwaneni bakhe, sele esele esekelwe ukwenza izigqibo, ukuvumelana, kunye nokuzinza ekujoliswe kuyo, kunye nokukwazi kwakhe ukulungiselela ukuzikhusela.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda i-Ederson Moraes yabantwana bebali kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
I-Fernandinho Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Iindaba zeMarcelo ebuntwaneni kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali leFred Childhood Story Plus Untold Biography Facts
I-Thiago Silva Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts